Maalinta: Abriil 15, 2020
MEB waxay soo gaabin kartaa rukhsadaha macallimiinta
MEB wuxuu yareyn karaa Oggolaanshaha Macallimiinta: Soojeedinta sharciga ah in wax laga beddelo Sharciga Golaha Tacliinta Sare ayaa Goluhu aqbalay. Marka loo eego sharciga lagu ansaxiyay Golaha Qaranka ee Turkiga, Jaamacaduhu waxay sii wadaan inay bixiyaan waxbarashada aasaasiga iyo dugsiga sare fasaxyada xagaaga. [More ...]
Wasiirka waxbarashada Qaranka Selçuk: Iskuuladu waxay noqon doonaan Fasax Xagaaga
Wasiirka Waxbarashada Qaranka Selçuk: Waxaan rajeyneynaa inay carruurteenu ku raaxeysan doonaan fasaxa xagaaga. Wasiirka Waxbarashada Qaranka Ziya Selçuk wuxuu la wadaagay “waxbarashada magdhowga” ee ku saabsan Golaha Tacliinta Sare (YÖK) iyo shuruucda waxbarashadda ee lagu ansaxiyay Golaha Qaranka ee Turkiga. [More ...]
Nooca cusub ee coronavirus Kovid-1, oo ka bilowdey Wuhan, Shiinaha oo loo gudbiyo in ka badan 19 milyan oo dad ah oo adduunka oo dhan ah, wuxuu si xun u saameynayaa hooyooyinka uurka leh si xun. Taas oo ah waqti xasaasi ah haweenka [More ...]
Khadka Talabixinta Dhakhtarka wuxuu ku shaqeynayaa Izmir
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay uxilsaartay La-talinta Dhakhtarka inay ka hortagto aruurinta cisbitaalada sababa cudurka faafa ee cudurka 'coronavirus' iyo inuu ku hago dadka dhib ku qaba inay taleefanka kula xiriiraan dhaqtarka. Bukaanka raba inay ka faa'iideystaan ​​adeegan waa inay ahaadaan [More ...]
850 Wadayaasha Basaska Dadweynaha ee Karanteri Quarantine
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Kayseri Inc. Feyzullah Gündoğdu, Maareeyaha Guud, wuxuu bixiyay macluumaad ku saabsan talaabooyinka la qaaday sababtoo ah xaqiiqda ah in basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay aysan ku safri karin go'aanka karantiil. Marka la eego baaxadda dagaalka viruska corona, gawaarida gaadiidka dadweynaha [More ...]
Shaqaalaha Tareenka Waddada oo Bilaash Wanaagsan Leh
Madaxweynaha laanta Demiryol Ada Ada Adazarzar Cemal Yaman, ayaa ku dhawaaqay ogeysiiska ay soo saareen barta rasmiga ah ee ururka shaqaalaha ee twitter-ka, wuxuu siiyay war wanaagsan in shaqaalaha la siin doono gunno buuxa Abril 29. Demiryol İş Union Adapazarı Laanta Agaasinka, shaqaalaha [More ...]
Buundada Xiran Laydhka lugta lugta ayaa laga furay Baku
Sanadka 2018, buundada dadka lugeynaya waxaa qorsheeyay Hay'ada Wadada Wadnaha ee Azerbaijan ee isgoyska Moscow Boulevard iyo 20 Janaayo Street, halkaas oo gaadiidleyda iyo dadka lugeynayaba ay aad ugu mashquulsan yihiin Baku. [More ...]
Daraasadaha Tareenka Qaranka ayaa kusii soconaya TÜVASAŞ
Maareeyaha Guud ee TÜVASAŞ Dr. İlhan Kocaarslan wuxuu baarey howlihii tareenka Qaranka ee soo saarista. Iyaga oo qaadaya dhammaan taxadarada caafimaad, qandhada dhamaan shaqaalaha waxaa lagu cabiraa albaabka, maaskaro wajiga ayaa loo qeybiyaa waana gacanta [More ...]
Dowlada Hoose ee Elazig ayaa dib u habeyn ku sameysay Jadwalka Baska
Degmada Elazig waxay sameysay qorshe cusub waqtiyada gaadiidka dadweynaha iyadoo la eegayo cabirka cudurada faafa ee Corona. Marka la eego baaxadda qabanqaabada, waqtiyada ugu dambeeya ee safarka waa 23.00:XNUMX dhammaan wadooyinka marka laga reebo duullimaadyada Şehit Fethi Sekin. [More ...]
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Manisa waxay bixisay taageero bas ah si loo hubiyo in gaadiidka dadka laga sii daayay xabsiyada la fuliyo nidaamka fulinta oo lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah. In kasta oo dowladda hoose ee Manisa ay sii wadayso gudashada waajibaadkeeda, xagga bulshada [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu cadeeyay in Erciyes uu aaminsan yahay in Kayseri iyo dalkeena ay aad uga xoog badnaan doonaan howsha adag ee aan ku jirno. Duqa magaalada Büyükkılıç, Erciyes 'Ottoman dhererkiisu waa 3 mitir [More ...]
Hawlaha nashqadeynta websaydhka waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa waax ka shaqeysa diiradda saareysa ganacsiyada iyo shirkadaha. Waa qodob muhiim u ah shirkadaha in ay iskood isugu soo bandhigaan jawiga dijitaalka ah iyo in ay u gudbiyaan dhammaan macluumaadka ku saabsan isticmaaleyaasha. [More ...]
Uma Gudbi Karo Soo-Gaarka Faaligga Wadnaha ee Akçaray oo leh Teknolojiyadda Filitaanka UV
ulaşımpark, technology unit filter UV markii ugu horeysay ee Akçaray maray fulinayay taariikhda tareenka shirkadda ee dalka Turkiga. GaadiidkaPark, oo ay la socoto tikniyoolajiyadda UV Filter ay adeegsanayso, ayaa sidoo kale gaadhay heer ugu sarreeya tayada adeegga oo ay siiso rakaabkeeda. [More ...]
Aydın-Denizli Highway qandaraaska waxaa la qabtay 26-kii Maarso iyada oo la raacayo habka wareejinta-ku-wareejinta, iyada oo la dammaanad qaadayo kaarka gaariga. Xaddiga dammaanad-qaadyada taraafikada ee loogu talagalay waddada waa 1,8 bilyan doolar Aydın-Denizli Highway hindisada waxaa la qabtay maalmihii coronavirus-ka. Qaabka-ku-wareejinta-wareejinta (BOT) waa ansax [More ...]
Halganka Corona ee Magaalo Xeebeedka Adduunka ee ka hooseeya Lens-ka
Machadka Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, oo diiradda saaraya halganka lagula jiro cudurka coronavirus ee magaalooyinka waaweyn ee dunida iyo tallaabooyinka ay qaadeen, ayaa saxeexay daraasad muhiim ah. Intii udhaxaysay 20-Mar-13 Abriil 2020 [More ...]
Maalgalin Dheeri ah iyo Shaqo Shaqo ayaa ka socota Warshadda Bosch ee Bursa
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay in ay war wanaagsan ka qabaan maalgashiga shisheeye iyo shaqooyinka maalmahan, kaas oo la halgamaya nooca cusub ee coronavirus (Covid-19), “Bosch wuxuu ku cusub yahay maalgashi dheeri ah oo gaaraya 500 milyan oo lira. [More ...]
İmamoğlu Wuxuu Qiimeeyay Agenda oo ay Wado Darawalada Tareenka
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu bilaabay booqashooyinka niyada lihi uu ku tagayo shaqaalaha looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan howsha cudurka faafa ee cudurka 'coronavirus' iyo inay qabtaan howlaha guud. İmamoğlu wuxuu booqashooyinkiisii ​​ugu horreeyay ku tagey tareenka dhulka hoostiisa mara iyo tareennada taraafikada iyo waxyaabaha qashinka qaada [More ...]
Wasiir Koca: 'Waxaan Taageersanahay Dhamaan Qeybahayaga Ka Shaqeynta Talaalka'
In statements ka dib markii kulan oo ka mid ah Wasiirka hadalka ninkeeda coronavirus Board Science Health Fahrettin, la tilmaamayo statements sax ah oo ku saabsan heerarka kala duwan ee cudurada faafa ma loo isticmaali karaa, "Ilaa iyo hadda aan ka helnay qaar ka mid ah natiijada, ka dillaacay suurto gal ah in Turkey [More ...]
Maanta taariikhda: 15 April 2004 TCDD adoo adeegsanaya internetka